Inkukhu kunye neeamangile | IBezzia
Inkukhu kunye neeamangile
UMaria vazquez | 18/07/2021 10:00 | Amakhadi
Ukuba utyile kwindawo yokutyela yamaTshayina, sele uzame Inkukhu kunye neeamangile. Asithembisi ukuba le iyafana naleya, kodwa iyasivumela ukuba sonwabele ngokulula kwaye eyahlukileyo kunesiqhelo kwesi sithako.
Le nkukhu ineeamangile kulula ukuyilungisa. Uya kuba, ewe, ukukhumbula kwangaphambili marina inkukhu ukuze ithathe lonke incasa yesosi yeswekile kunye nejinja. Iyure yanele, kodwa akufuneki ube nakho ukubukela iwotshi. Ukuba zimbini, akukho nto iya kwenzeka nokuba.
Ukongeza iiamangile kwesi sitya sidibanise itswele kunye nesanqante. Unokusika izilayi zale nto icekeceke kancinci okanye kancinci, kuxhomekeka ukuba uthanda ukuzitya phi. Ukuba uzithanda zithambe kakhulu, zisike zibhityane; ukuba, ngokuchaseneyo, uyabathanda i-dente, zinqumle ziyatyeba. Ngaba unesibindi sokuzama?
1 inkukhu yenkukhu, idayisi
I-40 ml yesosi yesosi⁣
1/3 ithisipuni ijinja yomhlaba
1/2 itispuni yeswekile emdaka
I-20 yeeamangile ezixutywe
1 itswele eliphakathi, lisikiwe
Iikherothi ezi-3, zixutywe zacolwa
150 ml umhluzi wenkukhu
1-2 iisupuni zamabele
Beka iityhubhu zeenkukhu, isosi yesosi, ijinja yomhlaba kunye neswekile emdaka kwisitya. Hlanganisa kakuhle kwaye mayiphumle efrijini kangangeyure ubuncinci ukuze inkukhu ithathe incasa.
Xa phantse ixesha lidlulile, shushu ioyile kwipani yokutshiza kunye susa iiamangile ngaphezulu kobushushu obuphakathi kude kube nsundu ngegolide. Rhoxisa kwaye ugcine.
Kwipani enye ngoku susa itswele kunye nesanqante Ngexesha lemizuzu engama-5.
Okwangoku, hlula omnye umhluzi wenkukhu kwindebe kwaye nyibilikisa umgubo wengqolowa kuwo.
Emva kwemizuzu emihlanu, buyisela iiamangile epanini kwaye faka inkukhu kunye ne-marinade kunye nomhluzi wenkukhu, kubandakanya umhluzi apho unyibilikise iCornstarch.
Hlanganisa kunye upheke yonke imizuzu eli-15 ngaphezulu kobushushu obuphakathi ukuze inkukhu ipheke kunye nesosi yande. E-Bezzia siye sayipheka sigquma isiqingatha sexesha ngaphambi kokuyityhila.
Isosi ayiqinanga ngokwaneleyo? Gcina ukhumbula ukuba ukucaphuka kuya kukutyeba. Ukuba kubonakala ngathi kuncinci kuwe, yongeza isitatshi. Ukuba kwelinye icala utyebe kakhulu, yongeza amanzi okanye umhluzi.
Ncedisa inkukhu ngama-almonds ashushu
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Amakhadi » Inkukhu kunye neeamangile
Abantu abangathembekanga: Ubuchaphazela njani ubomi bethu?
Uyilandela njani indlela "yeNwele eziGobileyo" inyathelo ngenyathelo